“Fuck” : Magical Word | ZAYYA
← အိပ်မက်မက်၏ – မမက်၏
ဥာဏ်အလင်း ( or ) Enlightenment →
“Fuck” : Magical Word
မေးတဲ့သူကလည်း ကြံကြံဖန်ဖန်မေးပြီး ၊ အိုရှိုးကလည်း ဟာသနှောရင်း ဖြေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်း ညစ်ညမ်းတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် အတွေးမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဝေါဟာရ တစ်ခုကို ရှင်းလင်းတယ် လို့သာ မြင်စေချင်ပါတယ်။
ဒါမှ မဟုတ်ဘဲ ရိုင်းတယ်ထင်ရင် သည်းခံပါ။
မေး။ ။ အိုရှိုး။ ကျနော်တို့ ဘာသာစကားမှာ ဘယ်ဝေါဟာရ၊ စကားလုံးဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါလဲ။ Tennis, meditation, chi-chi, mangoes, suntan, women, philosophy, exotic beaches, cricket , instant coffee, jazz music နဲ့ skinheads. စသဖြင့်။
ဖြေ။ ။ မေးတဲ့သူငယ် မီလာရီပါ။ ခင်ဗျား ရူးနေပြီထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ ကျနော် က ခင်ဗျားကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ ဖြေလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီမြို့နယ် ရဲမင်းကြီးက ကျနော့ကို လာခေါ်သွားမှာပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ခင်ဗျား ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ တစ်လုံးမှ အရေးကြီးတာ မပါလို့ပါ။
ရှေးအချိန်က God ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အင်မတန် တွင်ကျယ် အရေးပါခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာမန် ဒဿနဆရာ နစ်ရှေးက “ဘုရားသခင် သေပြီ” လို့ မကြွေးကြော်ခင် အချိန်အထိပဲ တွင်ကျယ်ခဲ့တာ။ နစ်ရှေးက အဲ့သလို ကြေညာပြီး နောက်ပိုင်းတော့ ဂျာမန် တစ်ယောက်က တစ်ခုခု ပြောရင် ခင်ဗျားတို့ လိုက်နားထောင်ရတော့တယ်။ ဟုတ်တယ် မလား။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ၊ ဂျာမန်တွေခေတ်ကိုး။ အဲ့အချိန်က ဂျာမန် တစ်ယောက် God သေပြီ လို့ ပြောရင် ခင်ဗျားက မှားနေတယ်လို့ ပြောရဲမလား။ တကယ် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သွားမယ် မဟုတ်လား။
တကယ်က သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ စကားက အဲ့ထက် ပို တာသွားပါတယ်။ နစ်ရှေးက God သေပြီလို့ ကြွေးကြော် အပြီးမှာ “အခု လူသားတွေ လွတ်လပ်သွားပြီ” လို့ ဆက်ကြေညာခဲ့တယ်။ God ကတော့ ( ကျိန်းသေတယ်) ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုခိုင်မာ အားကောင်းခဲ့တဲ့ စကားလုံး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တိုင်အောင် အခြား စကားလုံးတစ်ခု မပေါ်ပေါက်ခဲ့ရဘူး။ လူသားတွေ လွတ်လပ်ပြီလို့ ကြေညာပြီးသည့် တိုင်အောင် တကယ့် လွတ်လပ်မှုက ရောက်မလာခဲ့ဘူး။
အဲ့ဒီ အစား လွတ်လပ်မှု ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ကျဉ်းကျပ်မှု သာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်။ လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ နစ်ရှေးဟာ သူလုပ်ချင်တာကို ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဂရုပဲ မစိုက်တာလားတော့ မသိဘူး။ သူသတ်ခဲ့တဲ့ God အပြီးမှာ လွတ်လပ်ပြီလို့ ကြေညာသည့်တိုင် လူတွေ မလွတ်လပ်ခဲ့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာက အိပ်မက် မက်သလို စကားတွေ တတွတ်တွတ် ပြောပြီး အရူးထောင်ထဲပဲ ဝင်သွားခဲ့သလား မသိဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ God မရှိဘဲ မနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ God သာ မျှော်လင့်ချက်။ God ကသာ ရှေးအကျဆုံး မျှော်လင့်ချက် တစ်ခု ။ God သည်သာ ဖြေဆေး။ God သည်သာ ကိုးကွယ်ရာ၊ စိတ်ပျက်အားငယ်သူတို့ရဲ့ ဖြေဆည်ရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
နစ်ရှေးက God သေပြီလို့ ပြောအပြီးမှာ အဲ့ဒီ မျှော်လင့်ချက် မဲ့မှု၊ အထီးကျန်မှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ အဓိပ္ပာယ်မရှိမှု တွေနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့တော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ သူနောက်ပိုင်း ဘဝမှာ ရူးသွပ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့ အတွက်တော့ သူဟာ ဒီရာစုအတွက် ကမ္ဘာကို အတွေးသစ် ချပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် တစ်ယောက်ပဲ။ ဘာအဆိုပြုချက် သက်သေမှ မလိုအပ်ဘဲ သူ့စကားလေး တစ်ခွန်းဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ စိတ်ကို ဖြိုခွဲ ပစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အဲ့ဒါရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ ကျနော့ အတွက်ဆိုရင်တော့ God သေတယ် မသေဘူးက ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ သူသေသွားလို့လဲ တမ်းတ ငိုကြွေးနေစရာ မလိုဘူး။
တကယ့် ပြဿနာက God သေပြီ-ခင်ဗျားရဲ့ ဘာသာစကား ဝေါဟာရထဲက အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားပြီ လို့ ယူဆလိုက်ချိန်မှာ အခြား ဝေါဟာရ အစားထိုး တစ်ခု ခင်ဗျားမှာ လိုအပ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ပြဿနာပါ။ God ဆိုတာ အစွန်းတစ်ဖက်၊ အပြည့်ဝဆုံး အဆုံးစွန် အန္တိမ။ အဲ့ဒီ အန္တိမ အစွန်းတစ်ဖက် ဟာ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အခါ ခင်ဗျားဟာ အခြား အစွန်းတစ်ဖက်ကို လုံးဝဥဿုံ ရောက်သွား ရတော့တယ်။
အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လာမလဲ ။ God ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား Fuck ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ဒီဘာသာစကားမှာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သွားတယ်။ နစ်ရှေးသာ ဒီအချိန် ပြန်ရှင် လာပြီး ရောက်လာခဲ့ရင်တော့ အံ့ဩသွားမှာပဲ။ သူ သေပြီလို့ ပြောခဲ့တဲ့ God ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ အသက်ပြန်သွင်း ဖို့ ကြိုးစားတော့မှာပဲ ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီဝေါဟာရ ပြောင်းသုံးလိုက်တာဟာ ရူးသွပ်မှု တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ် စစ်တမ်း ထုတ်ကြည့်ပါ။
ကနေ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး စကားလုံး များ ထဲက တစ်လုံးကတော့ Fuck ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရ ဟာ မှော်ဆန်တဲ့ စကားလုံး၊ ဂမ္ဘီရဆန်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးပါ။ သူ့ရဲ့ အသံထွက်မှာတင် နာကျင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ရွံမုန်းမှု၊ ချစ်ကြည်မှု၊ တဏှာ စတာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘာသာဗေဒ အားဖြင့် ဆိုရင်လည်း သဒ္ဒါပုဒ် ( ဝါစင်္ဂ ) တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ စကားလုံးပါ။ ကြိယာ အနေနဲ့ ပဲ ကြည့်။ ကတ္တားပြု ကြိယာအနေနဲ့ ဆိုရင် ဥပမာ -“John fucked Mary” လို့ သုံးလို့ရတယ်။ ကံပြု ကြိယာ အနေနဲ့ “Mary was fucked by John” လို့ သုံးလို့ရပြန်တယ်။ နာမ် အနေနဲ့ “Mary isafine fuck”. ဒါမှမဟုတ်ဘဲ နာမဝိသေသန အနေနဲ့ သုံးဦးမလား။ “ Mary is fucking beautiful” စသဖြင့် သုံးနေကြတယ်။
ခင်ဗျားတို့လည်း သိကြမယ်။ ဒီ fuck ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလို ဝါစင်္ဂများများ သုံးနေကြတဲ့ စကားလုံးဟာ ရှားပါတယ်။ သိပ်များများ မရှိဘူး။ ဒီလိုပဲ Fuck ကို ညစ်ညမ်းတဲ့ ကာမ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ မသုံးဘဲ၊ အခြား ခံစားချက် ဖော်ပြရာတွေမှာ အခုလို သုံးတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရမယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီ Fuck ( အသံထွက် : ဖါ့က်ခ် ) ဆိုတဲ့ အသံထွက်လေး၊ စကားလုံးလေး ဟာ ခင်ဗျား မနက်တိုင်း တခုတ်တရ ရွတ်ဆိုမယ် ဆိုရင် ကျန်းမာရေး တောင် ကောင်းမွန် လာနိုင်ပါတယ်။ Transcendental Meditation တစ်ခု အဖြစ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ – “Fuck you” ( အသံထွက် : ဖါ့က်ခ်ယူ ) ဆိုတဲ့ မန္တရ ဂါထာ ကို ပီသ ကြည်မြစွာနဲ့ ငါးကြိမ်ငါးခါ နံနက်တိုင်း ရွတ်ဆို မယ် ဆိုရင် ( အနည်းဆုံးတော့ ) ခင်ဗျား တော်တော်ကြီး – လည်ချောင်း ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Ref: Osho: The Great Pilgrimage from here to here
Youtube Link: http://www.youtube.com/watch?v=6D7rWLzloOI
Filed under Osho Tagged with aggression, anxieties, displeasure, enjoyment, fraud, fuck, German, god, greeting, hostility, incompetence, language, Nietzsche, Osho, request, suspicion, trouble